Canadian crypto fifanakalozana Coinsquare manangana $ 30M - Blockchain News
Canadian crypto fifanakalozana Coinsquare manangana $ 30M
Canadian cryptocurrency fifanakalozana Coinsquare efa nanangana $30 tapitrisa ao amin'ny famatsiam-bola ny hitsiny vaovao.
nambara androany, ny famatsiam-bola ara-bola nentin'ny asa mafy sy nahay nanavotra Canaccord “dia ho ampiasaina mba solika eran-drafitra fitomboana…”
Part izany hanoto dia ahitana fandraisana mpiasa avokoa izay rehetra 100 mpiasa eo amin'ny volana ho avy, amin 'ny maso mba 200 mpiasa miasa ho an'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny telovolana faharoa amin'ity taona ity
“Isika dia nidobodoboka be, fa nidobodoboka be ny manao izany tsara. Isika dia handeha haka ny taloha-tsekoly lalana ho IPO ny Toronto Stock Exchange,” Cole Diamond, Coinsquare CEO, dia voalaza ho niteny.
Coinsquare hoy ny fanitarana ihany koa ny drafitra dia ahitana fampiasam-bola amin'ny fitrandrahana cryptocurrency, ny fandefasana ny fanaovam-barotra sy ny Arbitrage fisarahana sy ny famoronana ny vola “mifantoka amin'ny fampiasam-bola manerana ny tontolo nomerika-pananana” izay dia hatao hoe CoinCap vola.
Homeowners manerana an'i Amerika miezaka mivarotra ny tapitrisa dolara trano for Bitcoin
Nandritra ny taon-dasa, ...
Previous Post:Ahoana no mamorona Crypto Exchange
Next Post:Inona no nitranga tamin'ny Binance Exchange ary rehefa manomboka manao veloma
Mey 11, 2018 amin'ny 6:34 AM